Kuo: iPhone 12 6.7-inch miaraka amin'ny stabilizer sary vaovao | Vaovao IPhone
Kuo: iPhone 12 6.7-inch miaraka amina sary fanamafisana sary vaovao
Tsaho vaovao avy amin'ilay mpandalina Koreana Ming-Chi Kuo. Mifandray amin'ny mpamokatra singa izay ampahan'ny fitaovana Apple izy io, ka izay vaovao avelany hivoaka momba ny toetran'ireo faritra ireo dia tsy maintsy aseho ny saina, na dia izany aza, tsaho.
Ity indray mandeha ity dia anjaran'ny iPhone manaraka (antsoina iPhone 12, fa tsy voamarina). Hamafisina indray ao anatin'ilay tsaho fa efa niandrasako hatry ny ela ny haben'ny efijery vaovao lehibe kokoa noho ny iPhone 11 Pro Max, 6.7 santimetatra, ary manazava fa hampiditra rafitra fanamafisana sary vaovao ho an'ny fakan-tsary any aoriana izy io.
Nanamafy i Kuo androany fa ny iPhone 12 ho avy amin'ity taona ity dia hanana efijery 6.7-inch lehibe. Hanana izany koa ianao fakan-tsarimihetsika fakan-tsary lehibe kokoa, mba hahazoana hazavana misimisy kokoa sy hampitomboana ny kalitaon'ny sary nalaina sary sy horonan-tsary.
Izany rehetra izany dia efa noresahina nandritra ny andro maro. Ny zava-baovao dia avy amin'ny fanazavana a rafitra fanamafisana sary vaovao izay hampiditra ny iPhone 12 Pro Max, ary hiitatra amin'ireo maodely hafa amin'ny 2021.
Ny iPhone 11 Pro amin'izao fotoana izao dia manana fanamafisana ny sary optika ho an'ny sary sy horonan-tsary, saingy rehefa mampiasa ny lantiro Malalaka na Telephoto. Miaraka amin'ny rafitra fanovana sensor vaovao, ho voavaha io olana io, ary hapetraka amin'ny toeran'ny fakantsary fakan-tsary ny fanamafisana, fa tsy miankina amin'ny karazan'ilay solomaso ampiasaina.
Mahagaga fa i Kuo dia miantoka fa ity rafitra fanamafisana sary vaovao ity dia tsy hita amin'ny iPhone lehibe indrindra ihany. Angamba noho ny haben'ny singa ao aminy io, satria angamba ny iPhone 12 Pro Max somary matevina noho ny teo alohany ankehitriny, ary eo ny kit ny fanontaniana.
Ilay mpandalina dia naneho hevitra ihany koa fa ao anatin'ny fotoana maharitra, amin'ny 2022, dia hisy iPhone izay hanana solomaso periskop. Io dia ahafahan'ny zoom optika 5x na 10x aza. Amin'izao fotoana izao ny iPhones dia manana zoom optika 2x sy zoom digital 10x.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 12 » Kuo: iPhone 12 6.7-inch miaraka amina sary fanamafisana sary vaovao
Ny tohodrano AirPower dia afaka mitohy amin'ny fampandrosoana
Ny fandefasana IPad Pro dia mitohy mihazakazaka